Ogaden News Agency (ONA) – Kulanki Madaxda iyo Jaaliyada Netherland oo Guul kuso dhamaday
Kulanki Madaxda iyo Jaaliyada Netherland oo Guul kuso dhamaday
Posted by ONA Admin	/ June 9, 2013
Shir Balaaran oo ay soo agaasimeen Jaaliyadda Ogadeniya ee Wadanka Netherlands oo marka magaceeda lasoo gaaabiyo loo Yaqaano SORON oo lagu qabtay Magaalada Rotterdaam ee dalkaasi ayaa guul kusoo dhamaaday 8/06/2013.
Kulankan waxaa kasoo Qaybgalay Gudoomiyaha Jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogaddenia (JWXO) Admiral Maxamed Cumar cismaan iyo Hogaankaa Arimaha Dibadda ee JWXO Dr. C/raxmaan Sheekh Mahdi Maaddeey.
Shirkan oo aad loo soo abaabulay ayaa ay ka muuqatay dadkii kasoo qeyb galay shacni aad u quruxbadan iyo xamaasad kulul oo ay ka qaateen madaxda Sare ee kasoo qeyb galay kulankan iyaga oo si wayn uga dhargiyey bulshadi kasoo qeyb gashay shirka Guud ahaan isbadalada ka socda geeska afrika, taariikhdii haalganka ogadenia, wacyiga shacabka gudaha, iyo heerka uu marayo halganku cudud ahaan iyo siyaasad ahaanba, Tabarta cadawga IWM.
Shirkan oo uu furay Gudoomiyaha jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogadeniya Adm Maxxamed cumar cismaan ayaa waxaa warbixin kooban ka jeediyaey Bashiir Yuusuf gudoomiyaha jaaliyadda oo waftigii meesha fadhiyey iyo dadwaynihiiba uga war bixiyey miisaanka jaaliyadda Netherland qaabka ay u shaqayso iyo waliba miisaanka siyaasadeed ee ay dalkani ku leedahay iyo xidhiidhka ka dhexeeya Jaaliyadda iyo dawladda dalkani iyo shacabka Netherlands.
Waxaa Isaguna meesha ka hadlay Xoghayaha Jaaliyadda Holand Mudane Axmed dheere oo isaguna ka war bixiyey heerarkii kala duwanaa ee jaaliyaddu soo martay, qaabkii lagu aasaasay, Marxaladihi ay jaaliyadu soo martay iyo yoolka ay jaaliyadu eega hiigsaneyso.
Intaa Kadib Suugaan iyo dhextaalo kadib waxaa codbaahiyaha Lagu soo dhaweeyey Gudoomiyaha Jabhaddda Wadaniga Xoraynta Ogadenia Admiral Maxxamed Cumar Cismaan.
Gudoomiyuhu wuxuun si dhab ah u taabtay in shacabka gudaha iyo Ciidanka Xorayntu waajibkoodii guteen. itoobiya gudaha waan kaga adkaanaylagaga inta yar ay ku dhaqdhaqaaqeysona waa gurmad ay ka hesho dibaddaha inkaastoo dibadda wax wayn laga qabtay waxaa loo baahanyahay buu yidhi inaan itoobiya ka naafayno dibadda.
Gudoomiyaha JWXO kadib waxaa lagu soo dhaweeyey Codbaahiyaha Hogaanka Arrimaha Dibadda JWXO C/raxmaan Sheekh Mahdi Maadeeey wuxuuna ka shanqadhiyay in shidaalkii iyo khayraadkii aduunku soo dhamaaday marka afrika oo dihin tartan loogu jiro kheyraadkaas loo tartamayo waxaa ka mid ah shidaalka Ogadeniiya.
Dr Cabdiraxmaan waxaa kaluu ka hadlay wada hadaladii ONLF iyo Ethiopia dhexmaray meeshi ay ku danbeeyeen iyo isaga oo sheegay inay wali jiraan u kala dabqaad isku dayo la isku dayayo in la isku soo celiyolabada dhinac sidii miis dushiish ugu wada hadli lahaayeen. Mudane Cabdirraxmaan maaday waxa uu sheegay in Jabhada ONLF wada hadalaka u noqon karaan marka ay maslaxadda Ogadenia ka dhex arkaan.
Madaxda Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya ayaa kulankan lagu su aalay su’aalo badan oo ay jawaabo ka bixiyeen sidoo kale waxaa xubnihi kasoo qeybgalay kulankaan ay soo jeediyeen talooyin iyaga oo aad ugu amaanay madaxda Jabhada ONLF hoggaanka wanaagsan, bisyelka iyo adkeysiga ay u adag yihiin halganka, nugeylka ay u nugul yihiin shacabkooda iyo siday ugu daran yihiin la daggaalanka cadowga iyo kal kaalkisaba.
Waxaa hoosta laga xariiqay in loowada guntado halgan dheer iyo Allaah oo la wakiisho iyo Nasriga Eebe.